कसरी तपाईंको मार्केटिंग अनुवाद ईकमर्स बूमबाट फाइदा गर्नको लागि खर्च गर्नुहोस् Martech Zone
बुधबार, नोभेम्बर 11, 2020 बुधबार, नोभेम्बर 11, 2020 Douglas Karr
Ecommerce पछिल्लो दशकमा एक बढ्दो प्रवृत्ति भएको छ। र महामारीको साथ, अधिक व्यक्तिहरू पहिले भन्दा अनलाइन किनमेल गर्दैछन्। ईकॉमर्सले कम्प्युटरको पछाडि देखि विश्व भर डेमोग्राफिक्स पुग्नको लागि उत्तम तरिका प्रदान गर्दछ। तल, हामी यसको महत्त्वलाई हेर्नेछौं मार्केटिंग अनुवाद सेवाहरू र कसरी तपाईंको ई-कॉमर्स बिक्री बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने।
किन यो तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिंग रणनीति को लागी व्यावसायिक मार्केटिंग अनुवाद को उपयोग गर्न को लागी भुक्तानी गर्दछ
तपाइँको ईकामर्स गतिविधि को लागी एक पेशेवर मार्केटिंग अनुवाद सेवा को उपयोग गरी ठूला पुरस्कारहरु कटौती गर्न सक्दछ। Ofer Tirosh, भाषा सेवा प्रदायक टोमेड्सका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सल्लाह एक पेशेवर कम्पनी फेला पार्ने र यसलाई तपाईंको बनाउने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीति क्रम विस्तार गर्न:
यदि तपाइँ प्रश्नको देशको भाषा बोल्नुहुन्न भने काम गर्न एक सभ्य एजेन्सी फेला पार्नुहोस् - र यसलाई छिटो गर्नुहोस्! तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिंग उद्यमको सुरुवातबाट एजेन्सीलाई समावेश गर्नाले तपाइँको सफलताको अवसरमा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बनाउन सक्दछ। चाहे तपाई स्थानीय परम्पराको अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको लक्षित बजारमा मनपर्दो मार्केटि techniques टेकनीकको बारेमा जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ, वा तपाईको उत्पादनको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै, हातमा कसैलाई जसले अ flu्ग्रेजी बोल्ने भाषा बोल्नु आवश्यक छ। एक राम्रो अनुवादक जसले मार्केटिंग जानकारीदेखि वेबसाइट अनुवाद सेवाहरूमा सबै चीजहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ तपाईंको चाँडै तपाईंको अनमोल अंश बन्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीति.
Ofer Tirosh, Tomedes का CEO
ईकमर्स निश्चित रूपमा यस बर्ष विस्फोट भएको छ, व्यक्तिहरूले अनलाइन शपिंग गर्न बाध्य पारिएको छ जबकि स्टोरहरूले सामाजिक दूरीबाट लागू गर्दछ वा लागू गर्दछ। Q2 २०२० मा, अमेरिकामा ईकामर्स बिक्री, उदाहरणका लागि, कूदियो १ 16.1.१% मा, ११..11.8% बाट Q1 मा।
कसरी प्रयोग गर्ने जान्नको लागि पढ्नुहोस् मार्केटिंग अनुवाद तपाइँको eCommerce उद्यम बढाउन मद्दत गर्न।
कसरी मार्केटिंग अनुवाद प्रयोग गरी तपाईंको Ecommerce साइट मार्केट
मार्केटिंग अनुवाद डिजिटल मार्केटिंग को धेरै प्रकार कभर छ कि तपाइँ तपाइँको ईकामर्स वेबसाइट को बारे मा सही डेमोग्राफिक को लागी शब्द प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मार्फत मार्केटिंग अनुवाद, तपाईं निम्न डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरू तपाईंको ईकामर्स साइटमा व्यक्तिको फ्यानल गर्न सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। अनुवादका केहि उदाहरणहरू छन्? विशेष रूपमा एक डिजिटल प्रस from्गबाट, तिनीहरूले समावेश गर्दछ:
सामाजिक मिडिया पोष्टहरू
डिजिटल विज्ञापन, प्रदर्शन विज्ञापन र सामाजिक मिडिया विज्ञापन सहित
सम्बद्ध मार्केटिंग पोष्टहरू
मार्केटिंग अनुवाद परम्परागत विज्ञापनको लागि मार्केटिंग सामग्री अनुवाद गर्न पनि मद्दत गर्न सक्दछ यदि त्यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको कम्पनीले तपाईंलाई लगानी गर्न लायक छ भने मार्केटिंग रणनीतिमा ध्यान दिनुहोस् प्रयासहरू। मार्केटिंग अनुवाद परम्परागत प्रिन्ट विज्ञापन, ब्रोशर, बिक्री पत्र, फ्लायरहरू, क्याटलग, र अधिक ह्यान्डल गर्न सक्दछ।
सामग्री मार्केटिंग तपाईंको च्यानललाई अर्को तरिका हो मार्केटिंग अनुवाद ईकामर्स बूममा खर्च गर्नुहोस्। यसले सीधै विशेष उत्पादन वा सेवाको प्रचार गर्दैन। साटोमा, यसले उपयुक्त डेमोग्राफिकको लागि जानकारीपूर्ण वा मनोरन्जन गर्ने सामग्री उत्पादन गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक घरपालुवा आपूर्ति ईकामर्स स्टोर एक नयाँ पिल्ला तालिम को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका को बारे मा एक ब्लग पोस्ट उत्पादन गर्न सक्दछ।
सामग्री मार्केटिंगले मानिसहरूलाई ब्रान्डको साथ शामिल गर्दछ र सम्भावित ग्राहकहरूसँग उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने तरिकामा बोल्दछ। परम्परागत मार्केटिंगले मान्छे किन्नको माग गर्दछ जुन आजका धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूका लागि पालो हो। सामग्री मार्केटिंग कुनै पनि ठोस हिस्सा हुन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीति.
यदि तपाईं सामग्री मार्केटिंगको साथ जाने छनौट गर्नुहुन्छ भने, अनुवाद सेवाहरूले तपाईंको सहयोगी र मनोरन्जनकारी सामग्रीले यसको मूल सन्देश राख्दछ भन्ने कुरा निश्चित गर्दछ र नयाँ भाषा र संस्कृतिसँग जैविक रूपमा फिट हुन्छ।
मार्केटिंग अनुवाद र तपाईंको Ecommerce साइट
मार्केटिंग अनुवाद तपाइँको eCommerce साइट मा आफै पनि मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको साइट अनुवाद गरिएको छ भनि पक्का गर्दै रस्थानीयकृत एक को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रणनीति। सामान्य अनुवाद के हो? अनुवादले निश्चित गर्दछ कि पाठ आफैं नयाँ भाषामा राम्रोसँग पढ्छ। यद्यपि स्थानीयकरण पनि एकको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ eCommerce अनुभव। स्थानीयकरण गर्न सक्छन्:
वेबसाइटमा सबै प्रतीकहरू र स्वरूपणहरू अपडेट गर्नुहोस्, जस्तै मुद्रा प्रतीकहरू, ठेगाना ढाँचाहरू, र फोन नम्बरहरू
निश्चित गर्नुहोस् कि लेआउट स्थानीय उपभोक्ता अपेक्षाहरू र नयाँ भाषासँग मिल्दछ
स्थानीय सांस्कृतिक सम्मेलनमा मेल खाने फोटोहरू जस्तै ग्राफिक्स अपडेट गर्नुहोस्
Ecommerce साइटलाई स्थानीय नियमहरू जस्तै गोपनीयता कानून वा कुकी सूचनाहरू मेल गर्न मद्दत गर्नुहोस्
वेबसाइटमा सामग्री सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील राख्नुहोस्
राम्रो मार्केटिंग अनुवाद सेवा अनुवाद, स्थानीयकरण, र transcreation पनि ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यो प्रदर्शन गर्न सक्दछ ट्रान्सक्रिप्शन र अनुवाद सजिलो भयो भिडियो सामग्रीको लागि र सबै प्रतिलिपि लक्षित श्रोताको अपेक्षाहरूसँग प al्क्तिबद्ध गरिएको सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ।
यी सबै विवरणहरू एक पेशेवर देखिने eCommerce वेबसाइट बनाउन को संयोजन। यो एक ईकामर्स साइट खोज्नको लागि सामान्य छ कि खराब अनुवाद गरिएको वा अझै पनि विदेशी ढाँचामा मुद्रा प्रतीकहरू छन्। ती थोरै तत्वहरूले वेबसाइट प्रयोग गर्न गाह्रो बनाउँदछ र आश्चर्यचकित बनाउँदछ कि यदि तपाईं स्क्याम साइटमा ठक्कर खाइसक्नुभयो भने। निश्चित गर्नुहोस् eCommerce ग्राहक अनुभव वेबसाइट स्थानीयकरणको साथ तपाईंको ग्राहकहरूको लागि सकरात्मक हो। स्थानीयकरण सबै भन्दा राम्रोको एक अनिवार्य अंश हो अन्तर्राष्ट्रिय बजार रणनीतिहरु.
सस्तो मार्केटिंग अनुवाद सेवाहरू कसरी फेला पार्ने
बिभिन्न अनुवाद एजेन्सीहरू बीच वरपर शपिंग गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो व्यावसायिक नेटवर्क वरिपरि सोधेर वा अनलाइन खोजी गरेर तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले नजिकका अनुवाद सेवाहरू जस्तै व्यावसायिक अनुवाद सेवाहरू युके वा लन्डन अनुवाद एजेन्सी प्रयोग गरेर स्थानीय सेवाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेवा चाहानु भएको भाषाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सर्तहरू प्रयोग गरेर मार्केटिंग अनुवाद स्पनिश मा, मार्केटिंग अनुवाद चिनियाँमा, वा मार्केटिंग अनुवाद फ्रान्सेलीमा।
प्रत्येक सेवाको लागि प्रश्नहरूको सूची तयार गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाइँको सम्पर्कले कसरी यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ तपाइँले उनीहरूलाई कत्तिको जानकार छ र उनीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि कत्ति व्यक्ति योग्य हुन्छन् भनेर बताउँछ। तपाईं मूल्य निर्धारण बारे कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ, कसरी उनीहरू डेडलाइनमा रहन व्यवस्थित राख्छन्, उनीहरूका अनुवादक प्रमाण-पत्रहरू के हुन्, र उनीहरूको अनुभवको साथ मार्केटिंग अनुवाद छ।
टैग: ecommerce अनुवादअन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यअन्तर्राष्ट्रिय इकमर्सअन्तर्राष्ट्रियकरणमार्केटिंग अनुवादबहुभाषीऔषधिहरुप्रतिलेखनट्रान्सक्रिप्शन अनुवादअनुवादअनुवाद सेवाहरू
ग्राहकको डेटा प्लेटफर्म (CDP) प्राप्त गर्न Get चरणहरू तपाईको C-Suite को साथ खरीद गर्नुहोस्